ချစ်တယ် ( ChanBaek Yaoi ) - hninnuchennieaeri - Wattpad
ချစ်တယ် ( ChanBaek Yaoi )
ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှသည့် ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုအတွင်းမှ အခန်းတစ်ခန်းထဲတွင်ထိုင်နေသည့်ကောင်လေးတစ်ယောက်... ဝတ်ထားသည့်ဝတ်စုံအသစ်နှင့်မလိုက်ဖက်စွာ သူ့မျက်နှာကမှုန်မှိုင်းလျက်... ရှေ့တည့်တည့်တွင်ရှိသောမှန်ထဲသို့အသက်မပါသည့်မျက်လုံးများဖြင့်စိုက်ကြည့်နေသည်... နဂိုမျက်နှာချောချောကလေးကမူ ယခုသူ၏စိတ်အခြေအနေကိုဖော်ပြနေသလိုပင် အေးစက်တည်ကြည်နေသည်... ထိုအချိန်တွင်...
&quot;Baekhyun ရေ... သားလေး... ရော့ဒီမှာ ရင်ကပ်ပန်း... ထိုးလိုက်ပါဦး... နေ နေ... ဒေါ်လေးပဲလုပ်ပေးတော့မယ်...&quot;
အခန်းအတွင်းရှိတိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုဖြိုခွဲပြီး အခန်းထဲအပြေးဝင်လာသည့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်... Baekhyun ၏ မချစ်လှစွာသောအဒေါ်... ဟုတ်ပါသည်...ဒေါ်လေးကိုသူမချစ်... ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည့်သူ့ကို မုဆိုးမတန်မဲ့ကျွေးမွေးပြုစုပေးခဲ့သည်မှန်သော်လည်း ဒေါ်လေးကိုသူမချစ်... ခပ်ငယ်ငယ်မသိနားမလည်စဉ်အရွယ်ကချစ်ခဲ့ကောင်းချစ်ခဲ့လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း ယခုလူလားမြောက်လာသည့်အရွယ်တွင်တော့ ဒေါ်လေးကို သူမချစ်တော့... ပိုက်ဆံတစ်ခုတည်းကိုသာကြည့်ကာ အရာရာကို သူ့အလိုကျအတိုင်း Baekhyun ကိုခိုင်းလေ့ရှိသည့်အတွက်... ငြင်းဆန်မိလျှင်လည်း ကျေးဇူးတရားဆိုသောစကားလုံးနှင့်အမြဲကိုင်ပေါက်လေ့ရှိသည်...
Daebak! Good tl gu မြန်မြန်ထပ်ရေးနော်
ညိ ဟင်းနု welcome back.....saranghae.......
အား​ပေးရမှာ​ပေါ့ Wuti unnieကို
Author ​ရေsad ending မလုပ်​ညဲ့​ညော်​
Reply Get notified when ချစ်တယ် ( ChanBaek Yaoi ) is updated Continue with FacebookContinue
Love Betrayer By DeerBaekkie_Kzin
Dramatic fic ...
ကျွန်​​တော့်​ဘဝက သူနဲ့မ​တွေ့ခင်​ကထိ အရာရာအဆင်​​ပြေ​ချော​မွေ့​နေပြီးသား ...။
သူ ကျွန်​​တော့်​ဘဝထဲ​ရောက်​ရှိလာတဲ့​နေ့ကစလို့ ကျွန်​​တော့်​ရဲ့အ​ကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာ​တွေ ​ပျောက်​ဆုံးခဲ့တာ ။
သူ့အ​ပေါ် ကျွန်​​တော့်​ရဲ့မ​ကျေနပ်​ချက်​​တွေကို ဘယ်​လိုနည်းနဲ့မှ​ချေဖျက်​လို့မရခဲ့ဘူး ။
ဘယ်​​တော့မှလဲ ​ချေဖျက်​နိုင်​မှာမဟုတ်​ဘူး ။
သူ့ဘဝတစ်​​လျှောက်​လုံး ကျွန်​​တော့်​အမုန်း​တွေနဲ့ပဲ ရှင်​သန်​​နေ​စေရမယ်​ ။
ကျွန်​​တော့်​ရဲ့ဘဝတစ်​​လျှောက်​လဲ သူ့ကိုမုန်းတဲ့အမုန်း​တွေနဲ့ပဲ ရှင်​သန်​မယ်​ ။
သူနဲ့မ​တွေ့ခင်​က ကွန်​​တော့အတွက်​ အရာအားလုံးဟာ ပြီးပြည့်​စုံတယ်​ ထင်​ခဲ့တာ ။
တကယ်​​တော့ မဟုတ်​ခဲ့ဘူး ဆိုတာ သူနဲ့​စ​တွေ့တဲ့အချိန်​ကစပြီးသိခဲ့ရတယ်​ ။
သူနဲ့​တွေ့ပြီးမှပဲ အရာရာဟာ ပိုပြီးလှပအသက
Baekhyun-သုတေသနစမ်းသပ်မှု လေးတစ်ခုအတွက် ကျတော့်တို့ မိသားစုဘ၀လေးကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက် ခင်ဗျားဘ၀လည်း ပျက်စီးစေရမယ်..
Chanyeol-မင်းကို ဒုက္ခရောက်စေမယ့် ဒီသုတေသန အခန်းထဲကနေ ရအောင်ဆွဲထုတ်ပေးပါ့မယ်
Casts- other members of EXO
ဖတ်နေကြပုံစံမျိုး နဲ့ကွဲထွက်အောင် ရေးထားတာကြောင့် အားလုံး ဖတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ကျတော် သူ့ကို ချစ်တယ် လို့ ဖွင့်ပြောတော့ သူက မေးတယ်
"Will you die for me?" "မင်းငါ့အတွက်သေပေးနိုင်လား?" တဲ့
"မင်း အတွက်ဆို သေပေးနိုင်တာပေါ့" လို့ပြန်ဖြေမိတော့ သူကဘာပြန်ပြောလဲသိလား.........."လူတစ်ယောက်ကိုချစ်လို့သေပေးတယ်ဆိုတာ အရမ်းလွယ်လွန်းတယ်" တဲ့
"မင်း ကိုချစ်ကြောင်း ငါဘယ်လိုသက်သေပြပေးရမလဲ?" ဆိုတော့........
"ငါတစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ချစ်နေရင်း ငါတစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ကြည့်ရင်း ငါတစ်ယောက်တည်း အပေါ်မှာပဲ စိတ်ခံစားမှုတွေ ပုံအပ်ထားရင်း ငါတစ်ယောက်တည်း အပေါ်မှာပဲ မင်းဘဝ ကြီးကို မြုပ်နှံထားရင်း အသက်ရှင်နေပေးနိုင်မလား" တဲ့...............
သူသည်သာ ကျတော့် သွေး
သူသည်သာ ကျတော့် ကမ္ဘာ
သူသည်သာ ကျတော့် ပျက်သုဉ်းခြင်း
"Will You live for me,too?"
Baby (ChanBaek Yaoi)
အချစ်မပါတဲ့အိမ်ထောင်ရေးထဲက Chanyeol သူတကယ်ချစ်မိတဲ့ Baby ကို တွေ့လာခဲ့တဲ့အခါ...
​မောင့်​ အရိုင်းပန်း By heaven_chansmile
[ Rated - M ]
Cover @ B's graphic
Don't Leave Me (ChanBaek Yaoi)
မိဘများသဘောတူမှုကြောင့် မချစ်ဘဲ လက်ထပ်ခဲ့ရသည့် Chanyeol နှင့် Baekhyun................ Baekhyun က Chanyeolအပေါ် သဘောကျလာခဲ့သော်လည်း Chanyeol ၏ အချစ်ဦးက သူတို့ကြားထဲ ဝင်လာသည့်အခါ.............. Chanyeol တစ်ယောက် ဘာဆက်လုပ်မလဲ....... Baekhyun အတွက်ရော Chanyeolဆီက ဘာပြန်ရပါ့မလဲ..........